Imifanekiso kwi-Epiphany ngoJanuwari 19, 2018 ngokuvuyisana: ukuhleka nokuhlekisayo okukhuphela mahala
Imifanekiso ye-Epiphany ngoJanuwari 19, 2018
Ngomhla we-Epiphany Epiphany ngoJanuwari 19, unokwenza nantoni na. Kodwa unokuba unqwenela ukuzalisekisa iphupha elixabisekileyo lalo lonke ulwazi. Ngenxa yoko, ukuvuyiswa kwindinyana okanye iprose isenokusetyenziswa. Unokuthumela nje abahlobo bakho umfanekiso oqobo okanye ikhadi lokubulisa. Sithatha imifanekiso emihle neyona engavamile kwi-Epiphany ngo-2018. Iifoto ezithandekayo nezithintekayo, imifanekiso kunye nemidwebo ifanelekile ukuthumela kubathandekayo kunye nabantu abasondeleyo.
Imifanekiso emihle kwi-Epiphany ngoJanuwari 19, 2018-ukukhethwa kwamakhadi okuqala kunye nemifanekiso
Akuyimfuneko ukuthumela iposikhadi kwi-Epiphany. Imifanekiso eyayiqalayo nayo ingathunyelwa kubo bonke abahlobo. Sithatha imifanekiso emnandi kunye engavamile, ehambelana nomxholo we-Epiphany ngoJanuwari 19. Phakathi kweemifanekiso esazithathayo, unokufumana iposikhadi kunye namakhadi ahlekisayo. Ngokomzekelo, abahlobo bangathumela iifoto ezingaqhelekanga ekuhlambuleni okanye ekuhlambuleni amanzi kuMthendeleko wokubhaptizwa. Izihlobo sincoma ukuthumela amakhadi evidiyo aqhaqha.
Imifanekiso emihle ngovuyo nge-epiphany 2018-ukukhethwa kwemifanekiso
Ukutshintshwa kweposididi ezipholile kunye ezimnandi ziqala ngokuhlwa ngoJanuwari 18. Lo mqondiso wokuqwalasela uya kuba mnandi kumthumeli ngamnye. Ukukholisa oogxa, abahlobo kunye neentsapho ngosuku lwe-Epiphany, siya kuncedwa yimifanekiso esiyifumene ngokunyanisekileyo.
Ukukhethwa kwemifanekiso ebulisayo yokubonga i-Feast of Epiphany
Ukukholisa iholide yeholide yezihlobo zakho kunye nezihlobo kuya kwenzeka ngokukhetha iipastadi zangaphambili. Ziquka inqwenela kakhulu kunye nesifiso esilula.
Imifanekiso yobuOthodoki kwi-Epiphany ngoJanuwari 19 -vuyisana nevesi
Bonisa intlonelo kunye nokunakekelwa kwabathandekayo kungekhona ngosuku lweeholide zeeonto, kodwa nakwezinye iintsuku. Ngoko ke, sicebisa ukuba singabalibali ngabanye kwaye sibakholise ngempawu zakho zengqalelo rhoqo ngangokunokwenzeka. Kodwa ngoJanuwari 19, ngomhla we-Epiphany, sincoma ukuthumela zonke izihlobo ezintle imifanekiso ngokuvuyisana kwivesi.
Izibhengezo kwimifanekiso yeOthodoki kunye neenkondlo ze-Epiphany ngoJanuwari 19
Ukuthokoza ngeenqweno zeentsikelelo zikhulu ukuthumela ngomhla weeholide yama-Orthodox. Khetha ezihlukeneyo zeemifanekiso kunye neendinyana ziphakathi kwezi zilandelayo.
Imifanekiso engavumelekanga kwi-Epiphany - indlela yokukhuphela ngaphandle kwesiqoqo sonke
Imifanekiso yoqobo ayinakukopishwa kuphela, kodwa ikhutshwe kwakhona kwiikholeji ezipheleleyo. Ngenxa yoko, senze iqoqo lokuqala leemifanekiso kunye neepastadi zeMthendeleko yobhaptizo lweNkosi. Kwindlela elandelayo yokukhethwa kweefoto zeEpiphany saquka iintlobo ezahlukeneyo zemifanekiso. Phakathi kwabo unokufumana isitho kunye nomkhosi wokuqala we-Holy Epiphany. Ukongeza imifanekiso ekhethiweyo sincoma iindinyana okanye iprose ngokuvuyisana.
Imifanekiso ethandekayo kunye novuyo kwimidwebo ebonisa ukubhaptizwa kukaKristu 2018
Imidwebo yabantwana yeholide ye-Epiphany ikulungele ukutshintsha ii-postcards eziqhelekileyo. Kwakhona kwiqoqo elilandelayo sasifaka iifoto ezimnandi, imifanekiso yokuqala. Imifanekiso enjalo kwimthendeleko ye-Epiphany yeNkosi inokuthunyelwa kunye naluphi na uvuyo. Ukuzalisekisa imidwebo emihle kunye nefuthe, iifoto ezipholileyo sizicebisa. Ukubongela ngamazwi abo ngokuqinisekileyo kuya kubhenela ummkeli aze amnike iimvakalelo ezintle.
Imifanekiso emidala ne-Epiphany yeNkosi-iikariti zamariti ezibulisa
Thumela kwizihlobo kunye nabahlobo ngosuku lwe-St Theophany, unokwenza iifowuni ze-post ne-retro, imifanekiso. Siye sakhetha imifanekiso emidala yemifanekiso kunye nemidwebo kwi-Epiphany yeNkosi. Kwiimifanekiso esiyifumeneyo, singayifumana imifanekiso yokuqala kunye engavamile. Zikulungele ukuthumela ngomhla we-Epiphany ngoJanuwari 19.
Phakathi kweziqokelelo zamahhala, abafundi bethu banokuyithatha kalula imifanekiso ye-epiphany ngo-2018. Imifanekiso engaqhelekanga iya kunceda ukuvuyisana kakuhle ngoJanuwari 19 bonke abo baqhelene neenkondlo kunye neposi. Unokukhetha imifanekiso yasekuqaleni yobhaptizo lweNkosi kwimifanekiso emitsha nemidala. Kule meko, ukuqokelela imifanekiso ngokuncoma kunye nemidwebo ebonisa ukulungiswa kokusetyenziswa kunokukhutshwa ngokukhawuleza kwikhonkco esiyikhankanyileyo.
Ukukhuphisana kwabasetyhini ngomhla we-8 Matshi, isikolo sontanga kunye namantombazana kunye nonina
Usuku lwaMazwe ngamazwe lokuMkela 2016: xa ugubha, uyathokoza ngevesi kunye neprose
Ndiyakuvuyela ngoMhla woMama ukusuka kwindodana yakhe, kwivesi kunye neprose. Usuku lukaMama - olufutshane ukuthokoza kunye neenkomfa ze-SMS. Yintoni umhla woMama ngoMeyi?
Ndiyakuvuyela oogxa kwiNew 2018 Inja: ezisemthethweni kunye ezihlekisayo
I-skits e-Funny ye-New Year 2017 ye-Firecracker-kunye namahlaya okusebenza emsebenzini, abantwana besikolo nabafundi besikolo esiphakamileyo
Ukudweba ngoFebruwari 23 esikolweni kunye ne-kindergarten yokuncintisana-kwiimigangatho eneepensile kunye neepende. I-class-class ngeentetho ngeyiteyithi kunye namavidiyo
Iingoma ezilungileyo zePasika 2016. Imibongo yobuKristu yokuvuyela iPasika. Iingoma zokuqala zePasika-mncoma
I-Saladi kunye neentambo ze-crab, utamatisi kunye negalikhi
Ngaba kulungile ukutya ushukela?
Amaapile atyusiweyo enhlama
Yiyiphi i-heater yamanzi yokukhetha-ukuhamba okanye ukugcina?
Iklabishi neklabishi casserole
Iimali ezinama-raspberries kunye nee-alimondi
Umxinzelelo ophezulu. Izizathu zokunyuka kunye nezindlela zokujongana nazo
Ioli ye-Eucalyptus, iimpawu zonyango
Akunakukutshabalalisa ukuzimela komntwana wakho
U-Eldar Ryazanov wasweleka eMoscow